म पनि लेख्छु (I also Write)
भोक र राष्ट्रवाद
आँखामा पट्टि बाँधेको तिम्रो राष्ट्रवाद
पेटमा भर्भराइरहेको भोकको ज्वाला बोकेर
रोगले त खै के गर्ला भोक ले चै मार्नी भो भन्दै
दक्षिणतिर लम्किरहेछ ।
तिम्रो गरिवमुखि राज्यसत्ता
हातमा नाम्लो सहित कामको खोजिमा भौतारिदा भौतारिदै
सडक पेटीमा चीर निन्द्रामा लीन भैसको
मजदुरको निश्वाश अनुहारमा चम्किरहेछ ।
तिम्ले चुनाबी मन्चमा फलाक्ने गरेको
"सुखि नेपाली, समृद्द नेपाल" को नारा
हिजो आज खुल्ला मन्चमा
कसैले एक गास खान देलाकी भनेर लाम लागेका
ति असंख्य नर नारीको मनमा घन्किरहेछ ।
इतिहासमा कसैले भनेथ्यो सायद
भोकले २ वटा बाटो समाउछ- मृत्यु वा मुक्ती
के तिमिलाइ थाह छ हे सत्ताधिशहरु हो !
भोकाहरुको यो मौनता आँधि आउनु अघिको सन्नाटा पनि हुन सक्छ ।
हुन सक्छ तिनका मुटुहरु भित्र भित्रै
सबैलाई, सधैलाई भोकबाट मुक्ती दिलाउने
एउटा अर्को आँधीको बाटो समाउने
अपरिहार्यताको ज्वालामुखि दन्किरहेछ ।
Posted by Ramesh Adhikari at 9:37 PM No comments:
अनागरिकको लङ्ग मार्च
तस्बिर: अनलाइन खबर
गाममा काम भएन
बिनान बेलुका चुल्हो बलेन
पल्लो घरको धनिरामले भन्यो
उतै पाइन्छ काम
गाडिभाडाका लागि साहुकोमा धाएर
धनीरामकै पछि लाएर
पाउनुपर्ने भन्दा निक्कै कम तलबमा
बिच्चैमा आयो यो महामारी
जहाँ छौ त्यहिँ बस
काम दिने ठेकेदारले भन्यो
अब एक दिन पनि यहाँ नबस
संचय गरेको जम्मा २ किलो चामल थियो
त्यहि पनि ४ छाकमा सकियो
राहत बाँडेका समाचार सुन्दै
२ दिन त भोक भोकै बसियो
न त राहतले मलाइ सम्झियो
न त साहुले मैले पाउने बाँकि पैसा नै दियो
न त सरकारले घर फिर्तीका लागि कुनै ब्यबस्था गरिदियो
मर्नु भन्दा बहुलाउन निको नि हैन?
त्यसैले हिडेरै घर जान गुण्टा कसियो ।
सयौं किलोमिटर पैतालाले नाप्न शुरु गर्ने बेला सम्झेँ
हिजो क्रान्तिकारी कमरेडले
गाँउको ’भुमिगत’ सभामा मुठ्ठि कसेर
“हामी मजदुर, किसान र सर्वहाराको सत्ता ल्याउछौं“ भनेको
र ती भाषणहरुको बिच्च बिच्चमा
कलाकारहरुले गाएको गीत
“हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट शुरु हुन्छ“
तुना चुँडिएको चप्पलमा
सिमेण्टीको बोराको तुना हालेर
म पनि निस्केँ ति एक एक पाइला अगाडि बढाउँदै ।
मजदुर, किसानको सत्ताले देख्ला र
थाकेको ज्यानलाई उठबस गराउदै दुइ चार भाटा हान्ला भन्ने डरले
खेतका आलि र मसीना गल्ली छिचोल्दै
र यो सत्ताको आँखा छल्दै
पार गरें नागढुँगा भन्ने गौंडो ।
हातमा सुको पैसो थिएन
साथमा खानाको मेसो थिएन
पसीना र आत्मग्लानीको घोल पिएर
जसरी पनि ज्युदै ’घर’ पुग्ने अठोट लिएर
लखर लखर रित्तो सडकमा भौँतारीदै,
कहिले शान्त हुँदै, कहिले भोकले आत्तीदैँ
मेरो ’लङ मार्च’ अगाडि बढिरह्यो, बढिरह्यो ।
तिर्खा लाग्दा सम्झेँ
घरको छेवैमा पोहोर साल बनाएको कल धारो
भोक लाग्दा सम्झेँ
सानोमा आमाले कर गर्दै खुँवाउदा पनि फालेका भातका हरेक सीता
थकाइ लाग्दा सम्झे
साहुकोमा कमलरी र कमैया बसेका
र थाकेँ पनि भन्न नपाइ रातोदिन काम गरेका माता पिता ।
हिजो अन्यायमा पर्यौं भनेर युद्द लड्न आए तिनलाई सघायौँ
र मजदुर किसानको ’नयाँ ब्यबस्था’ ल्याउने भनियो तिनलाई पत्यायौं ।
खै सामन्तबाद त ढल्यो कि ढलेन ? थाह छैन ।
आज पनि मेरा बा आमा साहुको खेत अधियाँ कमाउछन ।
नयाँ ब्यबस्था आयो कि आएन त्यो पनि थाह छैन
भुमी पुत्र भनिएका हाम्रो गाँस बास कपासको आजसम्म ठेगान छैन ।
केही मनकारीले बाटामा दिएको खाना
अर्का थरी परोकारीले बाटोमा रखिदिएका
जडौरी जुत्ता घिसार्दै घर पुगेँ
घर पुगेर सुस्ताउँदै आफ्नो गुन्टा खोल्दै गर्दा
हिड्ने बेलामा सामान पोको पार्दै गर्दा
मलाइ सरकारले दिएको नागरिकता हाल्नै बिर्सेछु ।
त्यो कागजको टुक्रो बोक्नु र नबोक्नुले फरक के पार्दो रहेछ र?
भोक लाग्दा त्यसले खान दिने रहेनछ
प्यास लाग्दा पानी दिने रहेनछ
हामी गरी खानेका लागि
नागरिकता हुनु र नहुनुमा केही अन्तर न हुने रहेछ ।
किन कि नागरिकता बोके पनि नबोके पनि
हामी त दोश्रो दर्जाका नागरिक रहेछौं ।
ए हैन हैन हामी त अनागरिक रहेछौं .
२०७० बैसाख (लकडाउन)
Posted by Ramesh Adhikari at 2:57 AM No comments:
लाग्थ्यो संकटमा मलाई देशले सम्झिने छ
तर हजुर मत
महाकाली पारी भोक भोकै रहें
’कम्युनिस्ट’हरुले सत्ता चलाइरहेको बेला
तर मजदुर मत
आफ्नै देश छिर्न अयोग्य भएँ।
देश ठूलो कि भोक ठूलो?
यहि सबाल दोहो¥याइरहेछु
पारी मेरो भनिएको देश छ
वारि भोक भोकै कराइरहेछु ।
पहुंच हुनेले सरकार हल्लाए,
सरकारी खर्चमै जहाज चढेर आए
म चै महाकालीमा हेलिएर मरुँकी
अरु केही छ उपाए?
बिदेशिनु कुनै रहर थिएन
सबाल थ्यो पापी पेटको
महाकाली एउटा नदि हैन
पर्खाल रैछ बर्ग बिभेदको
तिनले फलाक्ने राष्ट्रबाद त
फगत एउटा लाज रहेछ,
जसलाइ छोप्ने कुनै भेष छैन
आज आएर बल्ल बुझ्दै छु हजुर
मजदुरको कुनै देश छैन ।
२०७६ चैत्र महिना कोरोना भाइरसका बेला देश लकडाउन भएको बेला ।
Posted by Ramesh Adhikari at 6:39 AM No comments:
अमेरिका डायरी -२
अमेरिका डायरी- १ पढ्नुभो?
कृष्णजीको सरप्राइज कल र गाडीमा ब्रेकफास्ट
बिहान निन्द्रामै थिएँ, फेसबुकको म्यासेन्जरमा कल आयो । आँखा मिच्दै बिस्ताराबाटै उठाएँ । कल मेरा पुराना साथि (उनि म भन्दा सिनियर जरुर हुन् तर जोसंग पनि तत्काल घुलमिल हुन सक्ने उनको गुणले उनलाई जुन सुकै उमेर समुहकासंग सजिलै साथी बनाइदिन्छ ।) कृष्ण भण्डारीको रहेछ । अमेरिका जाने अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो यात्रा विवरण सुनिश्चित गर्न नसकेको मैले अमेरिकामा हुने कुनै पनि साथीभाई अनि आफन्तलाई आफ्नो यात्रा विवरण भनेको थिइन ।
कृष्ण जी र म
मेरो योजना एक हप्ताको प्यालेस्टाइन भ्रमण पछी इजराइलबाट सिधै अमेरिका जाने भन्ने थियो । त्यो योजना सफल भएको भए म २ दिन पछाडी मात्रै वाशिंगटन पुगेको हुन्थें । तर प्यालेस्टाइन जान इजराइलले ट्रान्जिट भिषा नदिएकोले मेरो त्यो योजना तुहिएको थियो । त्यसैले अन्तिम घडीमा वाशिंगटनको टिकट काटेको मैले कसैलाई खबर गरेको थिइन । तर कृष्ण जीले भने मेरो फेसबुकको पोस्ट मार्फत म वाशिंगटन आइ कुन होटलमा बसेको छु सम्म पत्ता लगाई छाडेछन । कल उठाउदा थाहा भयो उनि त म बसेको होटलको मूल ढोका नजिकै पुगेर फोन गरेका रैछन । हत्तपत्त एकसरो मुख पखालेर सडकमा ओर्लें । उनि त आफ्नो गाडीमा मलाई कुरेर बसिरहेका ! साथमा सबवेको चिकेन र्याप पनि । कृष्ण जिको गाडीमै बसेर 'ब्रेकफास्ट' गरें मैले त्यो बिहान । आज आयोजकले दिनभर डिसी को 'गाइडेड' टुर गराउने योजना थियो । आयोजकको टुर पछि भेट्ने सर्तसहित कृष्ण जी र म छुट्टियौं ।
वाशिंगटन डीसी- नयाँ देशको नयां राजधानी
कृष्ण जी संग बिदा भएपछि कोठामा गएर राम्ररी मुख धोएँ । हिड्न सजिलो हुने पहिरन लगाएर आयोजकले भनेको समयमा होटलको लबीमा भेटिए पछि शुरु भयो हाम्रो सिटी टुर । २० देश बाट आएका २० जना होनहार अभियन्ता थिए हाम्रो समुहमा । साथमा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्सका तर्फबाट ३ जना लेइजन अफिसर । अनि आजको टुरको लागि गाइड पनि ।
हामी चढेको बस डु पोइन्ट सर्कललाई देब्रे पारेर अगाडी बढ्यो । बसले गति लिंदा नलिदै गाइडले वाशिंगटन डिसीका बारेमा आफुले जानेका कुराहरु भन्न थालीहाले । 'वाशिंगटन' कोलम्बिया डिस्ट्रिकको एक गाउँ जस्तै थियो । तर जब अमेरिकन क्रान्ति पछाडी जुलाई १६ १७९० मा रेसिडेन्स एक्ट मार्फत पोटोम्याक नदीको छेउमा रहेको यो ठाउलाई नयाँ देश 'संयुक्त राज्य अमेरिका' को राजधानी घोषणा गरियो, यसको रुपरंग नै फेरिने भयो । उसो त वाशिंगटन भन्दा अगाडी न्युयोर्क र फिलाडेल्फिया केहि समयका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी थिए ।
सन् १७९१ मा डिजाइन गरिएको वाशिंगटनको नक्सा
अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटनको सम्मानमा यो शहरको नामकरण गरियो । राजधानी घोषणा भएपछि अत्यन्त मिहिन ढंगले यो शहरको डिजाइन गरिएको थियो । त्यहि भएर यो शहरमा यथेष्ट पार्क अनि खुल्ला ठाउ, सबैको पहुँच भएका अत्यन्त सुलभ र चौडा सडक अनि चित्ताकर्षक सरकारी कार्यालयहरु देख्न सकिन्छ । हाम्रो गाइडका अनुशार वाशिंगटन डीसीका हरेक बाटोहरुको नामाकरण बिभिन्न राज्यहरुको नाममा गरिएको छ ताकी कुनै पनि राज्यले देशको राजधानीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको महशुस गर्नु नपरोस । र यो संघिय राजधानीको क्षेत्र (फेडेरल टेरिटोरी) भएकोले वाशिंगटन डीसी कुनैपनि राज्य अन्तर्गत पर्दैन । हामी बसेको होटलको नजिकै रहेको डुपोइन्ट सर्कल चाही सबैभन्दा ठुलो मध्यको एक सर्कल रैछ जहाँ ९ ओटा बाटाहरु मिसिन्छन अनि त्यो बिचमा एउटा मनमोहक पार्क छ ।
गाडी अगाडी बढ्दै गयो । हाम्रा गाइड भन्दै थिए- 'तपाइँ वाशिंगटनमा गगनचुम्बी भवनहरु देख्नु हुन्न । त्यसको कारण छ । वाशिंगटन डिसीमा रहेको वाशिंगटन स्मारकको उचाई भन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाइने नियम नै छ ।' न्युयोर्कको फोटोमा सयौंतला अग्ला भवन देखेको र वाशिंगटन डीसीमा पुड्का घरहरु मात्रै देखेर मेरो मनमा उठेको प्रश्नको जवाफ मैले भेटिहाले । डु पोइन्ट सर्कल छोडेको १२ मिनटमा हाम्रो गाडी रोकियो । हामीलाई बसबाट ओर्लिन भनियो ।
व्हाइट हाउसको आँगनमा उभिंदा
अमेरिकन राष्ट्रपति निवास र कार्यालय व्हाइट हाउस
बसबाट ओर्लेपछि दायाँ तर्फ नजर लगाउदा एउटा ठुलो पार्क र त्यसको दक्षिणी पुछारमा व्हाइट हाउस यानकी अमेरिकी राष्ट्रपति निवास देखियो । ६.७ एकडमा फैलिएको पार्कको दक्षिणतिर थियो व्हाइट हाउस । सुरुमा 'प्रेसिडेन्ट पार्क' भनिए पनि सन् १८२४ मा यसलाई लाफयेते स्क्वायर भन्न थालिएको रैछ । तत्कालिन अमेरिकन क्रान्तिको बेला अमेरिकी सेनामा काम गरेका फ्रान्सेली नागरिक मार्क्युयास लाफयत्तेको सम्मानमा त्यसो गरिएको रे । त्यो पार्कको बिचमा उनको पूर्ण कदको प्रतिमा समेत देख्न सकिन्छ ।
यहि स्क्वाएरमा तत्कालीन अमेरिकन समाजमा व्याप्त रंग्भेद्का डोबहरू पनि थिए । त्यहाको एउटा भूभागमा लेखिएको थियो 'स्लेभ मार्केट' । यो ठाउमा स्लेभहरुको बजार लाग्थ्यो जहाँ काला जातिका 'दास'हरुको खरिद बिक्रि हुन्थ्यो । तपाइँ हामीलाई सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । सम्झनुस हाम्रो तराइ मधेशमा लाग्ने पशु बजार जस्तै यो त्यस्तो हाट बजार थियो जहाँ पशु हैन फलामको सिक्रीले बाधिएका मानिसहरुको खरिद बिक्रि हुन्थ्यो । अहिले अमेरिकाले गरेको भौतिक र समग्र प्रगति देखेर लोभिने धेरै जना अमेरिकाको त्यो बर्बर इतिहासलाइ भने बिर्सिए झैँ गर्छन । तर अमेरिकन आफै भने आफ्नो त्यो कहालीलाग्दो इतिहास संसारलाई बताउदै छन् राष्ट्रपति बस्ने घरकै आगनमा रहेको पार्कमा कुनै बेला 'स्लेभ मार्केट' थियो भन्ने कुरालाई सम्पूर्ण आगन्तुकहरुलाई देखाएर ।
व्हाइट हाउसको आँगनमा म
लाफाएते स्क्वायरमा बरालिदै केहि बेर हिडेपछी पुगियो व्हाइट हाउसको मुख्य भवनको समिपमै । हाम्रा गाइड लगातार बोलिरहेकै थिए । यस्तो लाग्थ्यो त्यो ठाउको बिषयमा उनले उपलब्ध सबै जानकारी राखेका छन् । उनले ब्याख्या गर्दै थिए- 'व्हाइट हाउसको समग्र एरियालाई इस्ट विंग र वेस्ट विंग भनेर फैल्याईयो जहाँ अहिले बिभिन्न बिभाग/मन्त्रालयहरु छन्" । व्हाइट हाउसको सामुन्नेमा रहेको बाटोमा उभिएर उनि भन्दै छन- "यहाँ पुर्ब स्वीकृति लिएर प्रदर्शन गर्न पाइन्छ ।" अमेरिकन राष्ट्रपतिको नाकै मुनी प्रदर्शन गर्न पाइने कुराले मलाइ रोमान्चित बनायो । तर बिडम्बना त्यहि साता नेपाल सरकारले काठमाण्डौमा निषेधित क्षेत्रको दयारा बढाएर माइतीघर मण्डला लगाएतमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सूचना जारी गरेको थियो ।
होटल विलार्ड र 'लबी' सब्दको इतिहास
व्हाइट हाउसको अघिल्तिर उभिएर केहीबेर तस्बिर खिचेपछि हाम्रो पैदल यात्रा अगाडी बढ्यो । व्हाइट हाउसको उत्तरी नोखलाई दाहिने पारेर हाम्रो डफ्फा अगाडी बढ्दै गर्दा एउटा चोकमा गाइडले हामीलाई रोकिन आग्रह गरे । कुरा प्रष्ट थियो उनि कुनै महत्वपूर्ण जानकारी दिदै थिए त्यो ठाउको बारेमा । सबै जना उनको वरीपरी झुम्मीहाल्यौ । चोकबाट पुर्बतिर एउटा भवनलाई देखाउदै उनि धारा प्रवाह बोल्न थालिहाले । त्यो भवनको ऐतिहासिक महत्व रैछ जहाबाट हामीले वकालत र अभियानको क्रममा प्रयोग गर्ने शब्द 'लबी' को जन्म भएको रहेछ । कुरो के रैछ भने त्यो भवनमा कुनै बेला होटल विलार्ड थियो ।
होटल विलार्डको भवन
सन् १८६९ देखि १८७७ सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति रहेका युलिसिस ग्रान्ट यो होटलमा ब्रान्डी र सिगार खान नियमित जाने गर्थे रे । उनि नियमित त्यहाँ आउने थाहा पाए पछी सरकारलाई आफ्ना मुद्दामा सहमत गराउन वा प्रभावमा पार्न चाहने मान्छेहरु (बिशेषत: व्यापारीहरु) ठिक्क उनि आउने समयमा विलार्ड होटलको 'लबी' मा गएर कुर्ने गर्ने गर्दा रैछन । उनि आएपछि आफ्ना मुद्दाहरु राख्ने र प्रभाव पार्ने गर्थे । त्यहि होटल विलार्ड को लबी मा बसेर आफ्नो मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पार्ने समुहका कारण आजकाल हामीले वकालत र अभियानका लागि प्रयोग गर्ने शब्द 'लबी' र 'लबिष्ट' प्रचलनमा आएको रहेछ ।
क्यापिटल हिल र काठमाण्डौको सम्झना
विलार्ड होटल र शब्द 'लबी' को इतिहास जानीसके पछी हामीलाई पुन: बसमा बस्न भनियो । बस विलार्ड होटललाई देब्रे पारेर अगाडी बढ्यो । दाहिने तिर बिशाल पार्क थियो ।
त्यो पार्क तबसम्म सकिएन जबसम्म हामी चढेको बस अमेरिकी संसद भवन 'क्यापिटल हिल' मा गएर रोकिएन । हाम्रा गाइडको उर्दी आयो- अब झर्नुस, हामी अमेरीकी संसदको प्रांगणमा छौं । सबैजना झरेर पहिला त फोटो सेसन चल्यो । त्यसपछि गाइडले संसद भवनको संरचनाको बारेमा बोल्न थाले ।
दुइ सदनात्मक कार्यपालीका भएको अमेरिकाको संसद भवनको बायाँ पट्टि 'हाउस अफ रीप्रिजेंटेटिभ' र दाँयापट्टि 'सिनेट' रहेछ । सिनेट भन्दा दांयापट्टि चाही सर्बोच्च अदालत । संसद भवन र अदालतलाई चिरेर जाने बिचमा फराकिलो बाटो पनि । तर संसद भवन बाट अदालतसम्म जानलाई जमिन मुनीको बाटो । यी सबै विवरण सुनेपछि मैले वरिपरी नजर दौडाएँ ।
संसद भवनबाट पश्चिम तिर हेर्दा ह्वाइट हाउस भन्दा पनि पर रहेको वाशिंगटन स्मारक हुदै लिंकन मेमोरियलसम्म फैलिएको बिसाल खुल्ला ठाउ । त्यो खुल्ला ठाउ देख्दा म काठमाडौं सम्झेर निस्सासिएँ केहि बेर । के काठमाडौं यस्तो कहिल्यै बन्ला? यो प्रश्न मनमा आउदा नआउदै म बेचैन भएँ, कस्तो उकुस मुकुस भएर आयो । सोचें सायद अब काठमाडौंमा यति खुल्ला ठाउहरु कहिल्यै बन्ने छैनन । बरु भएका खुल्ला ठाँउ पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेर पिर्का जत्रा चउर मात्रै बाकीं रहने हुनकी भन्ने भयले मन उद्देलित भयो । करिब आधा घण्टा जति क्यपिटोल हिलमा बरालिए पछी हामी फेरी बसमा चढ्यौ ।
मार्टिन लुथर किंग र चर्चा नहुने अमेरिकी इतिहास
बस पोटोम्याक पार्कको बिचमा रहेको मनमोहक पोखरी (त्यसलाई ताल नै भन्दा हुन्छ तर बास्तबिक नाम चाही टिदाल बेसिन भन्दा रैछन) लाई दाहिने पारेर अगाडी बढ्यो । त्यतिबेलासम्म फुलिसक्न पर्ने तर यो साल फुली नसकेका चेरीका नांगा बोटहरु हेर्दै हामी अगाडी बढ्यौ । हाम्रो गाइडका अनुशार पार्कमा मनमोहक देखिने गरी हुर्केका ति चेरीका बोटका बिरुवाहरु जापानले अमेरिकालाई उपहार दिएको थियो । ढकमक्क चेरी फुलेर त्यो बातावरण चित्ताकर्षक हुने बेलामा नै हो रे यहाँ 'चेरी ब्लुजम फेस्टिभल' हुने । उता देब्रे पट्टि चाही पाटोम्याक रिभर र त्यसको पारी पेन्टागन र भर्जिनिया राज्य ।
बाटोमै पर्ने थोमस जेफर्सन र फ्रान्कलिन मेमोरियल बसबाटै अबलोकन गर्दै हामी चाही मार्टिन लुथर किंग मेमोरियलमा गएर रोकियौं । आइ ए पढ्दा मलाई निक्कै नै मन छोएको "आइ हयाब अ ड्रीम" पढेपछि म डाक्टर मार्टिन लुथर किंग जुनियरको अघोषित फ्यान भैसकेको थिएँ । उनको बारेमा थप अध्यन गरेपछि र उनले चलाएको रंगभेद बिरुद्दको अहिंशात्मक आन्दोलनको बारेमा बुझेपछि नै हो मलाई अहिंशाको शक्तिका बिषयमा बोध भएको । उसो त गान्धीको अहिंशालाई पनि थोर बहुत नपढेको कहाँ हो र?तर गान्धीका बिषयमा मेरा आफ्नै केहि 'रिजर्भेसन' हरु छन् । डाक्टर किंगको मेमोरियलमा पुग्दा मैले ति तमाम आदिबासी अमेरिकन हरुलाई सम्झे जसको इतिहास आजको अमेरिकी समाजमा निक्कै कम चर्चाको बिषय बनेको छ अथवा भनौ जबर्जस्ती लुकाइएको छ । उनको प्रतिमा मुनी उभिएर ति 'दास' बनाइएका लाखौँ बास्तबिक अमेरिकनहरुलाई मन मनै श्रद्दान्जली पनि दिएँ । र मनमनै सोचें किन आजको अमेरिकी समाजमा त्यो इतिहास त्यति चर्चाको बिषय बन्दैन जति हुनुपर्ने हो?
लिंकन र भियतनाम युद्द स्मारक
यो त्यहि ठाउ हो जहा उभिएर मरितीं लुथर किंगले आफ्नो
बहुचर्चित भाषण 'आइ ह्याब अ ड्रीम' दिएका थिए
मार्टिन लुथर किंगको प्रतिमालाई सलाम गरेर फेरी यात्रा जारी रह्यो । अब रोक्किने पालो थियो लिंकन मेमोरियलमा । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपती अब्राहम लिंकनको सम्मानमा बनाइएको यो मेमोरियलबाट पूर्वमा वाशिंगटन मनुमेन्ट र क्यापिटल हिल प्रष्ट देखिन्थ्यो । लिंकन मेमोरियलमा राति तर्साउछ वा अमेरिकी संसदमा लिंकनको भुत आउछ जस्ता अन्धविश्वासी कुरा पनि सुनियो त्यहि बेला । एउटा भब्य भवन भित्र अब्राहम लिंकनको बिशाल प्रतिमा राखिएको रहेछ जहाँ उनि कुर्सीमा बसेका देखिन्छन ।
लिंकनको प्रतिमा रहेको मुख्य भवनको आगनको भुइमा छापिएको एउटा टायलमा अंग्रेजीमा "आइ ह्याब अ ड्रीम" खोपको देखें । हत्त न पत्त गाइडलाइ सोध्न पुगिहाले किन त्यो टायलमा त्यस्तो लेखेको? उनले भने- मार्टिन लुथर किंगले यहि छिडीमा उभिएर तिमीलाई आसाध्यै मन परेको आइ ह्याब अ ड्रीम स्पीच(भाषण) दिएका थिए । छाती धक्क फुलेर आयो । बिभिन्न कोणबाट त्यो टायलको फोटो खिचें । किन किन त्यो टायल मलाई प्रिय लाग्यो ।
अमेरिकाले गर्ब गर्ने यी सबै स्मारक घुमिसकेपछि लिंकन मेमोरियलको उत्तर पूर्वमा रहेको भियतनाम भेटेरान स्मारक पुग्यौं । अमेरिकाले नराम्रोसंग हारेको भियतनाम युद्दमा ज्यान गुमाएका भेट्रान (सैनिक) हरुको स्मृतिमा बनाइएको यो स्मारकको संरचना भने बखान गर्न लायकको छ । सायद अमेरिकीहरुले गर्ब गर्न लायक युद्द नभएर होला यसको संरचना अरु मेमोरियल जस्तो झकिझकाउ र उचो थिएन । स्मारकको उत्तरतर्फको सडकमा हिड्ने जो कोहिले पनि आफ्नो देब्रेतिर भियतनाम युद्द स्मारक छ भनेर खुट्यान सक्दैन । जमिनको सतह भन्दा तल भित्तामा मार्बल र त्यो मार्बलमा युद्दमा ज्यान गुमाउने सैनिकहरुको नाम खोबिएको रैछ ।
भियतनाम भेटेरान मेमोरियल
मार्बल चाही कस्तो भने कसैको नाम पढ्दै गर्दा आफ्नो आकृती पनि परावर्तन(रीफलेक्ट) हुने । त्यहाँ आउने हरेक आगन्तुकलाई ति सैनिकमा आफुँ देखेको महशुस होओस भनेर त्यस्तो डिजाइन गरेका रे । यदि मारिएका ति सैनिक मध्ये कोहि आफ्नो मान्छे छ र उसको नाम कहाँनिर छ भनेर हेर्न पर्यो भने स्मारक छिर्ने मूल ढोका नजिकै क्याटलग बनाइएको ।
क्याटलगमा चाहीं कसको नाम कति नम्बरको मार्बलमा खोबिएको छ भनेर बिबरण दिएको । यो युद्द स्मारक छिचोलीसक्दा मेरो मनमा भने एउटा प्रश्न खड्कीरह्यो- के अमेरिकाले त्यो युद्दबाट केहि पाठ सिक्यो ? आजको दिनमा संसारमा मच्चिरहेका युद्धहरुमा अमेरिकाको अग्रणी संलग्नता देख्दा आफैले आफैलाई उत्तर दिएँ- अहं, के सिक्यो होला र खै? त्यो स्मारक घुम्दै गर्दा भियतनाम युद्दमा मारीएका ति अमेरिकी सैनिकहरु सम्झे, तिनका परिवार सम्झे जो सायद आफ्नो इच्छाले मारिनका लागि त्यहाँ गएका थिएनन । साथसाथै अमेरिका संलग्न प्रत्यक युद्दमा बगेका रगतका टाटाहरु टल्किरहेको देखें हरेक मार्बलका परावर्तनहरुमा । ति युद्द्का क्रममा हुने बमबारीमा परी चहर्याईरहेका घाउहरु र डरले चिच्याइरहेका बालबालिकाका आर्तनादहरु गुन्जिए मेरा कानहरुमा । स्मारकको अगाडिको हरियो चौर भरी इराक, अफगानिस्तान अनि सिरियाका उजाड बस्तीहरु देखें । कसैलाई पनि नजिताउने यस्ता युद्धहरु किन छेडीन्छन हँ? अनि संसारमा चलिरहेका ठुला युद्धरुमा अमेरिकी संलग्नता सधैं अग्रणी किन हुन्छ हँ? उसो त युद्दका सरदार अरु 'ठुला' र 'शक्तिशाली' मुलुकहरु पनि छन् । तर अमेरिकी भूमिमा उभ्भीरहदा मलाइ भने अमेरिकी संलाग्नाताकै बिषयमा सोध्न मन लागेको हो । मेरो मनमा खेलिरहेका यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्ने हैसियतमा हामीलाई घुमाइरहेका गाइड थिएनन त्यसैले उनलाई सोधिन । भोलिपल्ट अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका अधिकारी संग हाम्रो भेटघाट थियो । मनमनै सोचें यी प्रश्नहरु उनीहरुका सामु राख्ने छु यदि उनीहरुले सुन्न चाहे भने ।
भियतनाम वार मेमोरियलको त्यो भ्रमणपछी हामीलाई बसमा राखेर 'अमेरिकी इतिहास संग्रहालय' अगाडी लगेर झारीयो र भनियो- आजको औपचारिक गाइडेड टुर यत्ति नै हो, अब तपाइँहरु आफ्नो पाराले वाशिंगटनमा रहेका अरु महत्वका ठाउँहरु घुम्न सक्नुहुन्छ ।
Posted by Ramesh Adhikari at 3:35 AM No comments:
Labels: article, feelings, story
अमेरिका डायरी- १
(नेपालस्थित अमेरिकी दुताबासको सिफारीश र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ब्यबस्थापनमा २०७४ चैत्र महिनामा ३ हप्ते अमेरीका भ्रमणमा गएको थिएँ । ३ हप्ता सम्म अमेरिका रहदा मैले अनुभूत गरेका केहि कुरा शृंखलाको रुपमा यहाँ लेख्ने प्रयत्न गरेको छु । यी मेरा नितान्त व्यक्तिगत अनुभूति हुन् । सल्लाह सुझाबको लागि adhikarismit@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ)
'आइभीएलपी-२०१८' मा छनौट, एक 'प्लीजेन्ट सरप्राइज'
फागुनको पहिलो साता म नेपालगंजमा थिएँ । द्वन्द प्रभावित दिदीबहिनीसंग 'आफ्नो जीवनभोगाई अरुसामु कसरी राख्ने ताकी त्यसले थप पिडा हैन आफैलाई शक्तिशाली बनाओस' भन्नका खाँतीर 'न्यारेटिभ थेरापी' को कार्यशाला चलिरहेको थियो ।
मेरो जिमेलमा अमेरीकन दुताबासबाट एउटा इमेल आयो । इमेलमा लेखिएको थियो "बधाई छ रमेश अधिकारी ज्यु, तपाइँ IVLP २०१८ का लागि छनौट हुनुभयो" ।
आइभीएलपी (International Visitors Leadership Program) को बिषयमा मैले धेरै सुनेको थिएँ । संसारका धेरै नेताहरु कुनै बेला यहि कार्यक्रम अन्तरगत अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए भन्ने मलाई थाहा थियो । नेपालबाट पनि अघिल्लो बर्ष मेरो साथी/ दाइ राम भण्डारी जानुभएको थियो । उसो त नेपालबाट अरुहरु पनि जानु भएको होला तर उहाँसंगको सामिप्याताले यो कार्यक्रमको बिषयमा धेरै कुरा उहाँबाट नै थाहा पाएको हो । उहाले काठमाण्डौ पोष्टमा लेख समेत छाप्नु भएको थियो आफ्नो अनुभव समेटेर । त्यस्तो प्रतिष्ठित कार्यक्रममा चुनिएको खबर अप्रत्याशित रुपमा इमेल मार्फत पाउनु मेरो लागि एउटा 'प्लीजेंट सरप्राइज' थियो । यो खबर कसलाई भनुं कसलाई भनुं भयो र फोन गरें काठमाण्डौ रहेका सबि(मेरो जीवनसाथी) अनि सुरेश (मेरो भाइ) लाइ । कार्यशालामा संगै रहेका सहकर्मीहरु माझ पनि यो कुरा भनें ।
मलाई चुनिएको शिर्षक "स्वयंसेवा र नागरिक कार्य' (Volunteerism and Civic Action) थियो । अमेरीकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट (यानकी विदेश मन्त्रालय) को आमन्त्रणमा ३ हप्ते अमेरीका भ्रमणको लागि छनौट भएको थिएँ म । नेपालमा रहेको अमेरीकी दुताबासबाट सिफारीस भै अमेरीकी विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत IVLP केन्द्रिय कार्यालय वाशिंगटन डीसी बाट छानिएको रे ।
सहज भिसा प्रक्रिया सम्मानित व्यवहार
मेरो हातमा परेको अमेरिकाको भिषा
अमेरीकी दुताबासका कल्चरल अफेयर अफिसका अधिकारीहरुसंगको २, ३ पटकको भेट पछि मेरो पासपोर्ट र फोटो मागियो । मेरो लागि भिषा आबेदन उनीहरुले नै कन्सुलर विभागमा पठाइदिए । अब मैले गर्नुपर्ने जम्माजम्मी काम कन्सुलर विभागमा एक पटक स्वयम् उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । पहिलो पटक सन् २००९ मा नेदरल्यान्ड जानको लागि भिषा अन्तरबार्ता दिदा जस्तो म किन उतै भाग्दिन भनेर प्रमाणित गराउनु परेन । न त्यति बेलाको जस्तो अत्यन्तै लागुताभाष गराउने खालका प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्यो न त त्यति बेलाको जस्तो झन्झट यसपाला व्यहोर्नै पर्यो । सबै प्रक्रिया पुगेपछि ३ दिनमा पासपोर्ट लिन बोलाइयो । अब मेरो हातमा अमेरिकाको भिषा टाँसीएको आफ्नै पासपोर्ट थियो । साथमा काठमान्डौ-दिल्ली-दुबई- वाशिंगटनको दुइतर्फी टिकट, आवस्यक अन्य कागजात र बाटाखर्चबापतको केहि डलर पनि । अमेरिकन दुताबासमा मैले अनुभूत गरेको यो सहज प्रक्रिया सकिएपछि आखिर ३ हप्ते भ्रमणको लागी अमेरिका उड्ने दिन पनि आइहाल्यो । चैत्र ६, २०७४ का दिन म अमेरिका उड्नको लागी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगें ।
त्रिभुवन हवाईअड्डाको भिडभाड र दिल्लीको उडान
उसो त उडान दिउसो ४ बजेको थियो । तर हाम्रो एयरपोर्टको अस्तव्यस्तताका कारण १ बजे नै 'चेकइन' को लागि पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । अनपेक्षित रुपमा चेकइन प्रक्रिया आधा घन्टामै सकियो । किन अमेरिका जान लागेको, फर्किने ग्यारेन्टी के, पैसा बोकेको छ कि छैन, खै अफिसको लेटर, बिदाको लेटर खै? आदि इत्यादी प्रश्नहरुको बिनम्र उत्तर अध्यागमनका हाकिमसामु पेश गरेपछि उनको हातबाट पासपोर्टमा 'डिपार्चर' को ठप्पा लगाउदै आधि घन्टामा चेक इन हुनुलाई पनि ठुलै उपलब्धि मानियो । सोचें हाम्रो विमानस्थलमा ब्यबस्थापन चुस्त भएछ, भित्र भित्रै मख्ख पनि परें । तर त्यो खुशी सुरक्षा जाँच देखि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको यात्रु प्रतिक्षा गर्ने ठाउ पुग्दा नपुग्दै सास्तीमा परिणत भयो । ओह हो, त्यहाँ त शिवरात्रिको पशुपतिनाथ भन्दा नि बढी भिड ! अघिको खुशी क्षणभरमै खिन्नतामा बदलियो । अब आपत पर्यो उभिने ठाउँ पाउनु कहाँ ? (बस्ने ठाउको त के कुरा गर्नु) करिब ५ मिनटको फरकमा ३ ओटा उडान रहेछन । जम्मा ३ ओटा उडानका यात्री बोडिंगका लागि प्रतिक्षा गर्दा विमानस्थलको त्यो हालत भएको थियो । निशुल्क वाई फाई भनेर लेखिए पनि त्यो कामलाग्दो नभएपछी डाटाबाटै आफ्ना सामाजिक संजालमा स्टाटस पोस्ट गर्दै उभिए केहि बेर । २ ओटा जहाज उडेपछि बल्ल बल्ल बस्ने कुर्सि भेटे । यसो उसो गर्दा गर्दै भिडमा ३ घण्टा हराएछु । अब म उड्ने उडानको बोर्डिंगको घोषणा भयो । पुग्नु पर्ने वाशिंगटन डीसी थियो तर उड्नु पर्ने दिल्ली हुदै दुबई पुगेर त्यहाँबाट डीसीको लागि जहाज पकड्न पर्ने । जहाजमा चढेर ट्याक्सीवे मा निस्केको करिब आधा घन्टामा बल्ल म चढेको चिलगाडीले जमिन छोड्यो ।
दिल्लीमा ३ घण्टा र दुर्व्यवहारको डर
सन् २००९ मा दिल्ली हुदै नेदरल्याण्ड जाने क्रममै म बबुरोमाथी दिल्लीको इन्दिरा
दिल्ली विमानस्थलको एक दृश्य
गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय हवाईअड्डाका सुरक्षाकर्मीले गरेको दुर्ब्यबहार र तिनको 'सोधपुछ' को कारण जहाज छुटेर रातभर एयरपोर्टमै कुर्नुपरेको तितो स्मृतिसंगै दिल्ली झरें । डर थियो नेपाली पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै त्यहि दुर्ब्यबहार भोग्नु पर्ने छ । 'फ्लाईट ट्रान्सफर' को डेस्कमा गएर टाई सुट लगाएको कर्मचारीलाई आफ्ना बोर्डिंग पास अनि टिकट देखाए । ५ मिनट जती उसले त्यसलाई हात पनि लगाएन । उ ब्यस्त पनि थिएन । ५ मिनट पछी उसले ठाडो स्वरमा हिन्दीमा भन्यो "कहाँ जाना है?" मैले अंग्रेजीमा उत्तर दिएँ, जाने त अमेरीका हो तर यहाँबाट दुबई । १० मिनट कुर्न भनेकोले म नजिकैको कुर्सीमा बसे । ७ मिनटमै उसले जानु भनेर आफ्नो डेस्कको दाहीनेतर्फ इशारा गर्यो । भित्र लाइनमा बसेर "सेक्युरिटी चेक" गरी ट्रांजीट सम्म पुग्दा मैले २००९ मा भोगेको जस्तो कुनै अपमान यसपाला भोग्नु परेन । काठमाडौं एयरपोर्टमै भेटीएका पोखरेली साथी विश्व गौतम त्यहाको ३ घन्टे बिसाइको साथी बने । नेपालस्थित अमेरिकन दुताबासमा अंग्रेजी भाषा विभागमा जागीरे गौतम पनि कार्यालयको कामले अमेरीका जान हिडेका थिए । पहिले पनि अमेरीका आउजाउ गरेका गौतम मेरा लागी त्यो ३ घण्टा श्रोत व्यक्ति जस्तै बने- अमेरीकामा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुदैन? एयरपोर्टमा कसरी प्रस्तुत हुने? आदि इत्यादी बिषयमा आफ्नो अनुभव बाँडे । उनको दुबई उडान बिहानको ३ बजे भएकोले उनीसंग बिदा हुदै म भने आफ्नो चिलगाडीको गर्भमा पसें ।
दिल्ली देखी दुबईसम्मको हवाईयात्रा ४ घन्टाको थियो । जहाजमा दुइ घन्टाको लागी २० एमबि निशुल्क डाटा सहितको इन्टरनेट सेवा छ भन्ने थाहा पाएपछी मोबाइल झिके र त्यो प्रयोग गर्न तर्फ लागीहाले । जीवनमा पहिलो पटक ३५ हजार फिट भन्दा माथी आकाशबाट फेसबुक र ट्वीटरमा लेखे
जहाजभित्रको एक दृश्य
। परिवारसंग फेसबुक म्यासेन्जरमा च्याट गरें । समाचारका हेडलाइन चाहारे । २ घन्टाको भ्यालीडीटी भएको २० एमबीको डाटा प्याक ५२ मिनटमा सकेर म भुक्का भैहालें । अरु थप इन्टरनेट चलाउन डाटा किन्नु पर्ने रहेछ । दररेट हेर्दा सातो पुत्लो उडेपछी म आकाशमा सम्पर्कबिहिन हुन पुगें । त्यतिबेला महसुश गरें कि उपलब्ध श्रोतलाई किफायती ढंगले उपयोग गर्नुको महत्व के हो? दुबईको ४ घन्टे बिश्राम यता उता गर्दा बितिहल्यो । प्राय नेपाली दाजु भाइ भेटिने दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा समय बितेको चाही साच्चिकै पत्तो भएन किनकि उनीहरुसंगको गफ गाफ यसै पनि रमाइलो । अब पालो थियो करिब साढे १५ घन्टा लामो उडान दुबई देखि वाशिंगटन सम्म ।
वाशिंगटन डिसीमा पन्जाबी ट्याक्सी चालक
वाशिंगटन डीसी को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा ओर्लेपछि डु पोइन्ट सर्कलको छेवैमा एम्बेसी रो मा रहेको होटलसम्म जानका लागि ट्याक्सी खोज्दै जाँदा एकजना दक्षिण यसीयाली अनुहार परेका चालक लगेज समाउन आइपुगे । आधा घन्टे ट्याक्सी यात्राका क्रममा कुरा हुदै जाँदा थाहा भयो उनि भारतको पन्जाबबाट अमेरिका पुगेका रहेछन । कसरी अमेरिका आइपुग्नुभयो त ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले अमेरिका आउदाको रामकहानी सुनाए । एकजना दक्षिण भारतीय नागरिकलाई ३५ लाख भारतीय रुपैयाँ बुझाएर गैह्र कानुनी बाटोबाट छिरेका रहेछन । अरु त ठिकै हो मेक्सिकोको जंगलमा उनले पाएको दुख्ख र भोगेका त्रासदी निक्कै मुटु चहर्याउने खालका थिए । "मैले दर्जनौ महिलामाथी दलालहरुले जंगलमा बलात्कार गरेको र कयौं मान्छेहरु हिड्दा हिड्दै मरेको देखेको छु”- उनि त्यो त्रासदीको स्मृतिमा छिरे । उनकै समुहमा आएका श्रीमान श्रीमती मध्ये श्रीमती जंगलमा मरेको र श्रीमानले लाशलाई त्यहि छोडेर हिड्नु परेको दुखद घटना समेत देखेका रहेछन उनले । "रोक्किएर दुखः मनाउ गर्ने टाइम भएपो" पन्जाबी लबजको हिन्दीमा उनले सुनाए । टोलीको अघि अघि दलालहरुको समुहको मान्छे हुन्थ्यो । उसको चालमा चाल मिलाएर हिड्न नसक्ने जतिको अमेरिका छिर्ने सपना मेक्सिकोको जंगलमै तुहिन्थ्यो ।
अमेरिका छिरेको ५ बर्षसम्म त उनले एक सुका पनि बचाउन सकेनन् रे । दिनको १० घण्टा जोतिदा पनि वकिलको फी तिर्न मुस्किल थियो रे । "५ बर्षपछी कानुनी हैसियत पाए पछी मात्र मान्छेको जुनी पाएको हो मैले", उनले लामो सास फेरे । ट्याक्सीको ब्रेक लाग्यो, मैले उनको फोटो खिच्ने पछी केहि लेखें भने लेखमा उक्त फोटो प्रयोग गर्ने अनुमति मागें । उनले सहर्ष स्वीकार गरे अनि लेखें भने लिंक पठाउन समेत आग्रह गरे । मेरो 'भिजिटिंग कार्ड' लिएर गएका उनले बेलुका फेसबुकमा रिक्वेस्ट पनि पठाए । मिटरमा ६५ डलर चढेको थियो । मैले १० डलर टिप्स सहित ७५ डलर उनको हातमा थमाएँ र ६५ डलरको बिल लिएर छिरें होटल फेयरफ्याक्सको लबीमा । मन्दिप सिंह को त्यो कहालीलाग्दो कहानी मनमा बिझेन मात्र मैले ति मेरा सहपाठीहरु र आफुले चिनेजानेकाहरुलाई सम्झे जो ४० लाख तिरेर उनकै जसरी घरबाट हिडेको ६ महिना वा बर्षदिनमा अमेरिका छिरेका थिए । के उनीहरु पनि मलाई मन्दिप जस्तै त्यो दुखको कहानी सुनाउलान ? के गाउघरका साथि भाइ र आफन्त अनि घरपरिवारलाई सुनाए होलान? कम्तिमा आजसम्म मलाइ चाही सुनाएका छैनन् । यदी सुनाइदिने भए त्यहि बाटोबाट अमेरिका जाने लाइनमा लागेकाहरुलाई कम्तिमा आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मद्दत त गर्दो हो ।
होटलको लबी र सिएनएन को लाइभ
होटलको लबीमा 'चेक इन' गर्ने पालो कुर्दै गर्दा भित्तामा रहेको टिभीमा ध्यान गयो । सिएनएनले लाइभ कभरेज गरीरहेको थियो वाशिंगटनको पेन्सिलभेनिया एभिन्युबाट । दृश्यमा हजारौं मान्छेका टाउकाहरु प्रसारीत हुदै थिए, ब्यानरमा लेखिएको थियो "मार्च फर आवर लाइफ" । प्लेकार्डहरुमा अंग्रेजीमा लेखिएको थियो "बन्दुकलाई हैन जीवनलाई माया गर" । कार्यक्रम भैरहेको लोकेशनको बिषयमा रिसेप्सनमा सोधें, होटलबाट १५ मिनटको दुरीमा रैछ हिडेरै जान मिल्ने । मन मच्चीहाल्यो । करिब ४० घण्टाको यात्राको थकान र निन्द्रा समेत बिर्सेर त्यो जनसागर नियाल्न जाने निधो गरें । कोठामा गएर झोला बिसाई, एकसरो नुहाएर म ओर्ले सडकमा । १२ मिनट जति हिडेपछि मानिसहरुको भिडमा छिरें म । भिडले धकेल्दै धकेल्दै पेन्सिलभेनिया एभेन्यु नामको चौडा सडकमा पुर्यायो । यो त्यहि सडक हो जुन अमेरिकी राष्ट्रपति बस्ने व्हाइट हाउस देखि अमेरिकी संसद भवनसम्म पुग्थ्यो ।
पेन्सिलभेनिया एभिन्युको मंच
ओह हो त्यो मानब सागर ! करिब करिब व्हाइट हाउसको उत्तरी नोखदेखि अमेरिकी संसद भवन भएको क्यापिटल हिलसम्मको त्यो चौडा बाटोमा तोरीको गेडापनि नअट्ने भिड थियो । त्यहाँ अमेरीकामा गन फायर अथवा अर्ध स्वचालीत बन्दुकको गोलीबाट बिभिन्न समयमा मारीएका ४०० जनाका परिवारका सदस्य पनि साथै थिए । यो मार्चको आयोजना पार्कल्याण्ड, फ्लोरिडाको एक बिध्यलायामा हालसालै भएको गोलीकाण्डमा बाँचेका बिध्यार्थीहरुले गरेका थिए र उनीहरुलाई साथ् दिन लाखौको संख्यामा सर्वसाधारण उर्लेका थिए सडकमा ।
कार्यक्रम कति ब्यबस्थित र मर्यादित । बक्ता सबै स्कुले बिद्यार्थी । हरेक बक्ता ५ मिनेट भन्दा बढी नबोल्ने । बिचबिचमा विभिन्न शन्देशमुलक सांगीतिक प्रस्तुति । प्रत्यक बक्ताको सबै भन्दा बढी गालि खानेमा नेशनल राइफल एसोसियसन (NRA) र वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप प्रशाशन थिए । ति कलिला युवाहरु भन्दै थिए, "अबको चुनाबमा हामी सबै मतदान गर्ने छौ र बन्दुक प्रेमी हरुलाई नमिठो हार चखाउने छौ ।"
डिसीको सडकमा उर्लेको मानबसागर (तस्बिर: CBN न्युज)
सन् १७७१ को डिसेम्बर महिनामा गरिएको अमेरिकी संविधानको दोश्रो संसोधनमा "हरेक अमेरिकीलाई हतियार राख्ने अधिकार हुनेछ" भनेर बन्दुक राख्न पाउने कुरालाई संबैधानिक हक बनाइएको रहेछ । सुरुवातमा जनतालाई दमन बिरुद्द लड्ने हक हुने भन्दै बन्दुकले त्यो अधिकार सुरक्षित गर्ने तर्कका साथ यसलाई संबैधानिक हक बनाइयो भनिएता पनि त्यसो गर्नुको पछाडिको नियतको बिषयमा फरक फरक मत पनि देखियो अमेरिकीहरुकै बिचमा । कोहिले भन्थे गोराहरूले आफूभन्दा बलिष्ठ कालाहरुको आक्रमणबाट बच्नका लागि बन्दुकको सहारा लिए त् कोहिले भन्थे नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै परेको बेला राज्यको सुरक्षा समेत गर्नुपर्ने भएकोले जनतालाई हतियारले सुसज्जित पार्न पर्छ भन्ने धारणाले दोश्रो संसोधनमा त्यसो गरिएको हो । कारण जे सुकै होओस, बिरलै संशोधन हुने अमेरिकी संविधानको दोश्रो संसोधनमा हालिएको यो हक हटाउन त्यति सजिलो भने देखिदैन । कारण NRA यति शक्तिशाली छ कि त्यो संबैधानिक व्यवस्था हटाउन चाहने पार्टीको दुइ तिहाइ बहुमत आउन कुनै पनि हालतमा दिदैन । उसो त NRA ले ट्रंपको चुनाबी प्रचारका लागि ३० लाख डलर "चन्दा" समेत दिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले त ट्रंप भन्छन-"स्कुले नानीहरुलाई 'गन फायर'बाट बचाउने हो भने शिक्षकहरुलाई बन्दुक भिराउनु पर्छ" यानकी राइफलको ब्यापार दुगुना ।
अमेरिका डायरी- २
Posted by Ramesh Adhikari at 10:20 PM No comments: